Yoga Block Factory - China Yoga Block Manufacturers, abahlinzeki
Isendlalelo Sokubili seYoga
Izinto ze-Premium: Ibhulokhi le-Yoga lenziwe nge-foam ephezulu ye-EVA foam ehlala isikhathi eside ngokweqile, eqinile ngokwanele ukuxhasa isisindo somzimba. futhi kulula ukuyihlanza, alikho iphunga.
Luhlala Isikhathi Eside ukusekela igwebu: La mabhulokhi e-foam alula futhi asekelwayo akhiwe ngogwebu oluqinile, idizayini enesiphetho namakhona amakhona ukuze athole induduzo eyengeziwe, enendawo engaphezulu futhi engenamaphethelo abambekayo ukuze abambeke kalula.
Imibala emibili ongayikhetha: i-monochrome nemibala emibili.
Ukwelula: Amabhulokhi enzelwa i-yoga prop kanye nomngane ohambisanayo, ngoba ayithuluzi elibalulekile ekusebenzeni kwakho ukusiza ukunweba, ukuxhasa nokujulisa ukwelula kwakho ngenkathi usebenza ukwandisa ibanga lakho lokunyakaza.
Osayizi: Singahlinzeka ngosayizi ojwayelekile, njengo-7.6 * 15.2 * 22.9cm (kufaka phakathi u-120g 180g no-200g), 10.2 * 15.2 * 22.9cm (kufaka phakathi u-120g, 150g, 180g no-200g) .Ngaphezu kwalokho, sinesevisi yangokwezifiso, ngakho Ungakhetha obunye osayizi obufunayo.
Ukhokho Yoga Block
Incazelo: Amabhulokhi e-Yoga ayintandokazi eyintandokazi yama-yogis awo wonke amazinga, anikela ukwesekwa okukhulu nokuqina kokuma okuyinselele, kanye nokunikeza usizo olunhlobonhlobo nolusizo lwezimo zokubuyisa, ukuzindla, nokuningi. Le khwalithi ye-premium, i-100% Cork yemvelo izosheshe ibe intandokazi entsha. Ilula kakhulu kodwa ihlala isikhathi eside futhi iqine ngokulinganayo. Julisa ukwelula kwakho futhi uqondise ukuma ngomzamo omncane futhi ungabi nobunzima.
Ukakhokho onobungane: Ibhlokhi lethu lenziwe ngokhuni lwama-100% lukakhokho wemvelo, okusanhlamvu okusimeme okusimeme; ngakho-ke inendawo eqinile elula yokubamba. Kuyibhlokhi elingenabo ubuthi, eliqinile, elingashibilikisi, elingenamakha nephunga lomswakama.
Ikhwalithi Ehlala Njalo: Yenziwe ngokhokho we-Eco-friendly, lawa mabhulokhi e-yoga akunikeza ukubamba okuthambile ngendlela emangalisayo! Futhi ahlala ngokungaqondakali futhi amelana nokushelela, aklanywe kahle ukukusiza ekuzivocavoca kwakho i-yoga iminyaka ezayo.
Imiphetho yokududuza: Imiphetho ebunjiwe yaleli bhulokhi inikezela ukubambelela okuthambile, okuphephile nokunethezeka.
Kuphephile futhi kuyasebenza: Thuthukisa umkhuba wakho ngokusebenzisa amabhlogo ukujulisa umkhuba wakho, ugcine ukuqondanisa okufanele, futhi usize ukuhlala uphephile ngokunciphisa ukulimala nobunzima bemisipha - leli bhulokhi lingakusiza ukukwenza konke.
Osayizi IyatholakalaIzilinganiso zethu ezijwayelekile ziyi-7.6 * 15.2 * 22.9cm ne-10.2 * 15.2 * 22.9cm. Ngaphezu kwalokho, ungenza ngezifiso ubukhulu nesisindo osifunayo.